အိမ်ခြံမြေ ရောင်းရန် (For Sale)
3,900 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်​ဒဂုံမြို့နယ်​လုံးချင်းအိမ်​​ရောင်းမည်​ 🏡 သိန်း - 3900 ( ညှိနှိုင်း ) 💰 ​မြောက်​ဒဂုံမြို့နယ်​ 31 ရပ်​ကွက်​ ဆရာစံလမ်းမကြီးအနီး ပင်လုံဆေးရုံ ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ VIP ၊ City mart အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့်ဆေးရုံကြီးကုန်တိုက်ကြီးများအနီး သစ္စာလမ်းတံတား ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ပင်လုံလမ်းမကြီး ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး နှင့် ဆရာစံလမ်းမ တို့ကိုအသုံးပြုပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိဘဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့စွာသွားလာနိုင်​ လမ်းကျယ်​ , လမ်းသန့်​ဖြစ်​သည်​ ​မြေအကျယ်​ - ...
ရန်​ကင်းမြို့နယ်​Bauk Htaw Condo​ရောင်းမည်​
2,300 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ Bauk Htaw Condo ​ရောင်းမည်​ 🏩 သိန်း - 2300 ( ညှိနှိုင်း ) 💰 ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ ​ဘောက်​​ထော်​ ​ဘောက်ထော်ဘူတာရုံလမ်း မိုးကောင်းလမ်း ရွှေကောင်း Hot Pot အနီး Bauk Htaw Condo အကျယ်​ - 1600 Sqft6Floor 1 Master Bedroom (Bathroom/Toilet attached) + Bath Tub2Normal Bedrooms (Bathroom/Toilet attached)4Aircons တစ်​အိမ်​လုံးကျွန်းပါ​ကေးခင်းထား လိုက်​ကာများတပ်​ဆင်​ထား မီးဖို​ချောင်​ ,​ရေချိုးခန်း ,အိမ်​သာ​ကြွေခင်းကပ်​ အားလုံးပြင်​ဆင်​ပြီးအသင့်​​နေ ...
စမ်း​ချောင်းမြို့နယ်​Mini Condo ​ရောင်းမည်​
1,200 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
စမ်းချောင်းမြို့နယ် Mini Condoရောင်းမည် 🏩 သိန်း - 1200 ( ညှိနှိုင်း )💰 စမ်း​ချောင်းမြို့နယ်​ ဗဟိုလမ်းမကြီးအနီး Asia Royal Hospital အနီး လမ်းသွယ်,လမ်းကောင်း အကျယ် - 28' x 36' ပေ5Floor Hall Type တစ်အိမ်လုံးပါကေးခင်း ရေချိုးခန်း - ဘိုထိုင် ကြွေခင်းကပ် #ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရန်⭐...
6,800 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မရမျးကုနျးမွို့နယျ လုံးခငျြးအိမျရောငျးမညျ 🏡 သိနျး - 6800 ( ညှိနှိုငျး ) 💰 မရမျးကုနျးမွို့နယျ5ရပျကှကျ သုဓမ်မာလမျးမကွီးအနီး ကြောကျရတှေငျးလမျးအနီး လမျးသှယျ မွအေကယျြ - 100' × 100' ပေ အိမျအကယျြ - 30' × 50' ပေ ဘိုးဘှားပိုငျမွေ2RC2Master Bedrooms 1 Single Bedroom3Aircons ပါကေးခငျး အနောကျလှညျ့ ကွညျ့လိုပါကတဈရကျကွိုတငျခြိနျးဆိုပေးပါရနျ⭐...
​တောင်​ဥက္ကလာ Serene Condo ​ရောင်းမည်​
6,035 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
တောင်ဥက္ကလာ Serene Condo ရောင်း / ငှားမည် 🏩 Fully Furnished 🌟 ရောင်း - သိန်း - 6035 ( ညှိနှိုင်း ) 💰 ငှား - တစ်လ - 60 သိန်း ( ညှိနှိုင်း ) 💰 တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်6ရပ်ကွက် ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီးအနီး ဝေဇယန္တာ City Mart အနီး လမ်းသွယ် အကျယ် - 3000 Sqft7Floor3Master Bedrooms 1 Living Room 1 Helper Room တစ်အိမ်လုံးပါကေးခင်း Swimming Pool GYM Table Tennis Play Ground 24 Hours Security တိုက်သစ် အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေ 🌟 #ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရန...
3,400 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ရွှေမိုးကောင်းကွန်ဒို​ရောင်းမည်​ 🏩 Fully Furnished ⭐ သိန်း - 3400 ( ညှိနှိုင်း ) 💰 ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ မိုး​ကောင်းလမ်းမကြီး​ပေါ် Shwe Moe Kaung Condo အကျယ်​ - 2100 Sqft High Floor 1 Master Bedroom2Double Bedrooms Living Room, Dining Room Kitchen Room2Lifts 24 Hours Electricity Car Parking 24 Hours Security Generator , GYM Room Swimming Pool #ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရန်⭐...
စမ်း​ချောင်းမြို့နယ်​ Mini condo​ရောင်းမည်​
1,250 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
စမ်းချောင်းမြို့နယ် Mini Condo ​​ရောင်းမည်​🏩 သိန်း - 1250 💰 စမ်းချောင်းမြို့နယ် ​မြေနီကုန်း ဗားကရာလမ်းမကြီးအနီး Dagon Center အနီး မြေနီကုန်းဈေးလမ်း Yangon Lucky Condo Shwe Dagon Pagoda View အကျယ် - 15.5' × 60' ​ပေ4Floor 8 ထပ်​ခွဲတိုက်​ 1 Master Bedroom2Aircons တစ်​အိမ်​လုံးကိုရီးယားပါ​ကေးခင်း တိုက်အသစ် BCC ကျပြီးဖြစ်သည် Lift , 24 Hour Security ကားပါကင်သီးသန့်မပါပါ တိုက်ရှေ့ရပ်လို့ရပါသည် အားလုံးပြင်​ဆင်​ပြီးအသင့်​​နေ အ​ရှေ့ဘက်​လှည့်​ #ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ြ...
2,500 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မြေကွက်ရောင်းမည် 🏡 သိန်း - 2500💰 သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီးအနီး Zawana City Mart အနီး AKK Shopping Mall အနီး သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ အကျယ် - 40' × 60' ပေ ဂရန်မြေအမည်ပေါက် ရေမီးပါသည် အုတ်တံတိုင်းခတ်ထား မြေသီးသန့် #ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရန်⭐...
5,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်​လုံးချင်းအိမ်​ရောင်းမည် 🏡 ရောင်း - 5500 သိန်း ( ညှိနှိုင်း )💰 သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ကြီးပွားရေးရပ်ကွက် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနီး အိမ်ရာဝန်းအတွင်းတွင်ရှိသည် မြေအကျယ် - 60' × 80' ပေ အိမ်အကျယ် - 4400 Sqft ဂရန်မြေအမည်ပေါက်2RC3Master Bedrooms3Single Bedrooms ဘုရားခန်းသီးသန့် ,ဧည့်​ခန်း စာကြည့်​ခန်း ,ထမင်းစားခန်​...
15,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ရန်ကင်းမြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည် 🏡 သိန်း - 15000 ( ညှိနှိုင်း ) 💰 ရန်ကင်းမြို့နယ် ဘောက်ထော် အကျယ် - 96' × 80' ပေ2RC ဂရန်မြေအမည်ပေါက်4Master Bedrooms2Single Bedrooms တိုက်သက်တမ်း4နှစ် #ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင်ချိန်းဆိုပေးပါရန်⭐...
Copyright © 2019 Aye Chan Myay Real Estate Co.,Ldt. - Aye Chan Myay Real Estate Co.,Ldt.
Copyright © Aye Chan Myay Real Estate Co.,Ltd. | Featured Agency of iMyanmarHouse.com